Nahoana no saika voarara ny diaben’ny vehivavy tamin’ny 8 Martsa tany Kirghizistan · Global Voices teny Malagasy
Samy niara-nanohitra ny fanjakan-dehilahy ny vondrom-behivavy, ny fikambanana LGBT ary lehilahy vitsivitsy
Mpanoratra Aisha Jabbarova Nandika (ru) i Анна Щетникова, Miriam Palisson, Liva Andriamanantena
Voadika ny 25 Marsa 2019 15:26 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, русский, Español, Français, Italiano, English
Diabe tao Bichkek tamin’ny Andro Iraisampirenena ho an’ny Vehivavy. Sary : Aïcha Djabbarova. Sary nalaina tao Bichkek teo anoloan’ny sarivongan’i Kurmandjan datka , lehiben'ny foko kirghize teraka tamin ‘ny taonjato faha XIXe.
Nofoanan’ny manampahefana tao Bichkek, renivohitr’i Kinghizistan, haingana ny fandrarana ny fivoriana ho an’ny Andro Iraisampirenena ho an’ny Vehivavy. Nitranga ihany ilay hetsika na dia teo aza ny fihantsiana nataon’ireo mpiaro ny fanjakan-dehilahy.
Ny 6 Martsa 2019, nandrara vetivety ny fivoriana izay nokarakarain’ireo fikambanana Bichkek Feminist Initiatives (FBI) (Hetsika Feminista ao Bichkek) izay fanaon’izy ireo isan-taona nanomboka ny taona 2016 ny manampahefana tao Bichkek, tamin’ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy, izay andro tsy hiasana any amin’ny ankamaroan’ny firenena Repoblika Sovietika tamin’ny vanimpotoan’ny URSS.
Noho ny «fiarovana ny olom-pirenena» no antony nanaovan’ny kaominin’ny renivohitra Kirghize ity fandrarana ity, kanefa tsy nisy ny fanazava momba izany bebe kokoa.
Fa nofoanana tampoka izany fanapahan-kevitra izany, ora vitsy taty aoriana, taorian ‘ny lahatsoratra maromaro tao amin’ny fampahalalam-baovao teo an-toerana sy ny tsikera mamaivay tao amin’ny tambajotra sosialy, anisan’izany ny Facebook.
Nilahatra tao an-drenivohitra ihany ny farany ny olona miisa 150 teo ho eo mba hitaky ny hampitsaharana ny herisetra atao amin’ny vehivavy sy ny hametrahana ny fitovian-jo eo amin’ny lahy sy ny vavy. Nihiaka ireo mpanao fihetsiketsehana hoe: “ajanony ny kolikoly “, “fiarovana sy fahasamihafana “, “tanàndehibe madio “, “sekoly tsy misy fanavakavahana ara-pananahana”, ary “fiarovana ho an’ny vehivavy eny amin’ny sehatra ho an’ny daholobe.”
Fihetsiketsehana ho an’ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy tao Bichkek. Sary : Aïcha Djabbarova. Sora-baventy mivaky hoe: «Mirehareha amin’ny maha sarimbavy sy sarindahy».
Namory ny karazan’olona rehetra ny fihetsiketsehana ka naneho ny tena fahasamihafan’ny mponina ao Bichkek. Fahasamihafana izay efa niadian’ny vondrona nasionalista nandritra ny taona maromaro – izay matetika niaraka tamin’ny fanohanan’ny fitondrana.
Nilaza i Nazik Abylgazieva, mpikatroka avy ao amin’ny fikambanana LGBT+ Labrys ao an-toerana fa «zava-dehibe ny fanatrehana ny fihetsiketsehana na dia teo aza ny tsindry sy ny fikasana ny handrara izany ».
Hoy izy : « Nanatevin-daharana ny hetsika aho, mba hampisehoana fa tsy hangina aho, na dia miatrika ny fanilikilihana amin’ny ambaratonga rehetra aza aho amin’ny maha mpikambana ahy ao amin’ny vondrom-piarahamonina LGBT».
Fihetsiketsehana tamin’ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy tao Bichkek. Sary Aïcha Djabbarova. Sora-baventy eo afovoany : « Vehivavy iray ao anatin’ny efatra no iharan’ny herisetra. Mbola firy no ilaina ankoatra izany ? »
Fety nahazo fandrahonana
Mijanona ho iray amin’ireo daty manan-danja indrindra ao amin’ny fanisan’andron’ny firenena toa an’i Kirghizistan ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny Vehivavy, izay anisan’ny URSS teo aloha, talohan’ny nahazoany ny fahaleovantenany. Saingy mitaraina ny ankamaroan’ireo feminista fa lasa lanonana fanolorana fehezam-boninkazo io andro io, izay manome vahana ny fomba fijerin’ny fanjakan-dehilahy momba ny vehivavy ho mpikarakara tokantrano, ary tsy niraharaha ny niandohan’ny fanafahana navoakan'io daty io.
Tiako ny mampatsiahy anareo ny fiandohan’ny 8 Martsa. Io no andron’ny zon’ny vehivavy sy ny zazavavy, ary ny zon’olombelona. Tsy andro natao fotsiny hanajantsika kokoa ny vehivavy izany fa io ihany koa no andro tokony hitolomantsika ho amin’ny fitoviana.
Ho vavolombelon’izany fironana izany, i Tadjikistan, izay mpifanolo-bodirindrina any Atsimon’i Kirghizistan nanova ity andro ity nanomboka ny taona 2009 ho Fetin‘ny Reny. Norarana tsy hanao fihetsiketsehana ireo vehivavy any Kazakhstan, izay mpifanolo-bodorindrina avy ao Avaratra, ny andron’ny 8 Martsa, efa nandritra ny taona maromaro izay. Nankalaza matetika ity daty ity niaraka tamin’ny vazivazy manavakavaka ny vehivavy i Noursoultan Nazarbaier, izay filohan’i Kazakhstan, nandritra ny taona maromaro.
Fihetsiketsehana ho an’ny Andro Iraisampirenena ho an’ny Vehivavy tany Bichkek. Sary : Aïcha Djabbarova.
Izany no mahatonga ny fisian’ny ambadika politika amin’ny fivoriana isan-taona ataon’ny BFI isaky ny 8 Martsa, ao anatin’ny tsy dia fisian’ny jadona loatra avy amin’ny «toeran’ny toby» miisa dimy any Azia Afovoany.
Natao «ho an’ny zon’olombelona, sy ho an’ny zon’ireo rehetra manao fihetsiketsehana» ity fihetsiketsehana ity tamin’ity taona ity araka ny filazan’i Bektour Iskender, mpanorina ny tranonkalam-baovao Kloop, izay nandray anjara tamin’ ny fihaonana.
Nilaza ny fihetseham-pony mitovy amin’izany ihany koa i Rtoa Abylgazieva, izay avy ao amin’ny fikambanana Labrys, nandritra ny antsafa iray niarahany tamin’ny Global Voices :
Anisan’ny olona mifandray amiko ny mpivarotena, ny vehivavy mitondra ny tsimokaretina VIH, ireo hafa izay nanana tantara tamin’ny fiankinan-doha amin'ny fifohana zava-mahadomelina teo aloha, ny mpitsabo , ireo mpampianatra, ireo mpilalao sarimihetsika, ny mpiangaly mozika, ny mpanakanto, ary ireo vehivavy rehetra samy manana ny tantaram-piainany. Kanefa samy manana ny zavatra hitovizana avokoa isika rehetra: voadaroka isika, voaolana, ary voafetra ny zontsika. Nanao fanamby tamin’io rafitra io sy tamin’ny tenako aho raha tonga nandray anjara tamin’ny fihetsiketsehana.
Nilaza tamin’ny Global Voices i Guliaim Ailchy, filohan’ny BFI fa efa zava-dehibe sahady ny fahatontosan’ity diabe ity :
Tsy hanan-jo hanao fihetsiketsehana intsony isika, anatin'ny dimy taona, raha tsy tonga androany.
Tsy nisy ireo fihantsiana nampanantenaina
Misy ny fironana mampiahiahy amin’ny fanavakavahana sy amin’ny herisetra atao amin’ireo vondrona voahilikilika hatrizay, toy ny vondrom-piarahamonina LGBT, na dia firenena demaokratika indrindra ao amin’ny faritra aza i Kirghizistan.
Mbola tolona iray hafa ny zon’ny vehivavy any amin’ny firenena ahitana fakana ankeriny zazavavy ary miparitaka sy mazàna no tsimatimanota ny herisetra atao amin’ireo vehivavy.
Tao anatin’izay taona vitsivitsy lasa izay, nihamafy orina narahina voka-dratsiny ny toeran’ny mpandala ny mahazatra ara-tsosialy. Noho izany, nampanantena ny hetsika tia tanindrazana Kyrk Choro ny andro alohan’ny 8 Martsa fa ho avy hanaparitaka ny hetsika.
Nalaza ratsy ny Kyrk Chrono tamin’ny taona 2014 tamin’ny horonantsarin'ny fanafihana tao amin’ny toeram-pandihizana sy tao amin’ny toeram-pisotroana misy karaoke izay nahitana ireo vondrona nanala baraka ireo mpivarotena tao an-toerana noho izy ireo niresaka tamin’ireo mpanjifa vahiny.
Nilaza ny mpikambana ao amin’ny vondrona fa efa nampitandrina ny kaominina izy ireo ny amin’ny fikasan’izy ireo hanaparitaka ny fivoriana, izay nahatonga ny manampahefana handrara ny fihetsiketsehana.
Fihetsiketsehana ho an’ny Andro Iraisampirenena ho an’ny vehivavy tao Bichkek. Sary Aïcha Djabbarova. Sora-baventy eo afovoany : « Ny fanomezana tsara indrindra azonao omena ahy dia ireo zoko ».
Ny 8 Martsa, nidina an-dalambe nitsitokotoko tsikelikely ireo mpikambana ao amin’ny vondrona, izany no natao dia ny mba hanolorana voninkazo ho an’ireo vehivavy. Mpitandro ny filaminana maro tsikaritra tao an-toerana.
Kanefa nahatonga ireo vondrona marefo hahatsapa ho vao maika voarahona kokoa ny fisian’ireo antsoina hoe «tia tanindrazana» eo amin’ny fiarahamonina.
Ny andro mialoha ny diabe, nilaza tamin’ny Global Voices ny vehivavy iray sarindahy, antsoina hoe Lola, fa zava-dehibe ny handehanana any amin’ny fihetsiketsehana «mba hisehoana sy ho re», saingy nisalasala izy ny hanatevin-daharana izany.
Tsy fantatro raha azo antoka ho ahy izany. Sarotra ho anay [sarindahy na sarimbavy] ny mivoaka. Tsy mahatoky olona intsony izahay. Matetika izahay no iharan’ny herisetra. Matetika mampidi-doza izany. Misy mihitsy aza ireo olona tsy mihevitra ahy ho olombelona.
Nandika (ru) i Анна Щетникова